Samsung là thương hiệu nước nào? Có nên mua tủ lạnh, máy giặt Samsung không? | Muasalebang - Muasalebang
Samsung là thương hiệu nước nào? Có nên mua tủ lạnh, máy giặt Samsung không? | Muasalebang
Tủ Lạnh 0 lượt xem 16/04/2022
Đang Đọc: Samsung là thương hiệu nước nào? Có nên mua tủ lạnh, máy giặt Samsung không? | Muasalebang in Muasalebang
AbakwaSamsung baya ngokuya begomela isikhundla sabo emakethe yemishini yobuchwepheshe nezinto zikagesi, izinto zikagesi. Ikakhulukazi, iziqandisi ze-Samsung nemishini yokuwasha ziyaziswa kakhulu ngemikhiqizo yazo ehlukahlukene futhi zihlala zihamba phambili kwezobuchwepheshe ukuletha isipiliyoni esiphelele kakhulu kubasebenzisi. Uma ungenakho ukuqonda okucacile ukuthi iluphi uhlobo lwezwe i-Samsung? Futhi Ingabe kufanele uthenge isiqandisi se-Samsung nomshini wokuwasha? Isihloko esingezansi sizokunikeza lonke ulwazi olufunayo. Landela manje!
1 Iluphi uhlobo lwezwe i-Samsung?
2 Ingabe kufanele ngithenge isiqandisi se-Samsung?
2.1 Idizayini yesimanjemanje, ehlakaniphile
2.2 Izintengo ezinengqondo, amasegimenti amaningi ongakhetha kuwo
2.3 Amandla ahlukahlukene
2.4 Ukonga amandla, ekuthuthukisweni okusimeme
2.5 Ukusebenzisa ubuchwepheshe obuningi obuthuthukile
2.6 Ukuhlanganisa izici eziningi ezihlakaniphile eziwusizo
3 Ingabe umshini wokuwasha we-Samsung muhle?
3.1 Idizayini yomnyango we-Addwash ingeza lula
3.2 Yonga amandla ngobuchwepheshe be-Digital Inverter
3.3 Isivinini sokujikeleza esinamandla
3.4 Izinhlelo zokuwasha ezihlukahlukene
3.5 Isigubhu sedayimane sinokuqina okuphezulu, sinakekela ngobumnene indwangu ngayinye
3.6 Ubuchwepheshe bokugeza amabhamuza be-Eco
3.7 Ubuchwepheshe bokuwasha umusi STEAM CYCLES
3.8 Vikela izindwangu ezithambile nge-Wobble
3.9 I-Air Turbo Drying System
3.10 Ubuchwepheshe be-Antibacterial Ag + Silver Nano
Iluphi uhlobo lwezwe i-Samsung?
I-Samsung Corporation iyinhlangano enkulu yamazwe ngamazwe yaseKorea eyasungulwa ngo-1938, nesiqalo sayo njengenkampani yokuthengisa yokudayisa. Ngemva kweminyaka engaphezu kwamashumi amathathu yokusungulwa nokuthuthukiswa, i-Samsung Group manje inesilinganiso esikhulu kunazo zonke kanye nomthelela emnothweni waseKorea ikakhulukazi futhi ingenye yemikhiqizo yobuchwepheshe ebiza kakhulu emhlabeni namuhla. Imisebenzi ye-Samsung kancane kancane yahluka ngezimboni ezihlanganisa: ukucubungula ukudla, izindwangu, umshwalense, izibambiso, izindlu nezitolo. Kusukela ngeminyaka yawo-1990, abakwaSamsung baye banweba ukusebenza kwabo emhlabeni wonke, bagxila kakhulu ekutshalweni kwezimali ocwaningweni nasekuthuthukisweni kwezobuchwepheshe nakuma-electronics abathengi. Imikhiqizo ye-Samsung ibilokhu iqinisekisa isikhundla sayo esiqinile futhi yathatha amasheya amakhulu emakethe emikhakheni eminingi ngenxa yocwaningo lwayo nemizamo yokuthuthukisa ebeka ubuchwepheshe obuhlakaniphe kakhulu, obuphambili kakhulu nobuyingqayizivele emkhiqizweni ngamunye, okuletha ukwaneliseka kubathengi.
Ngo-2019, i-Samsung yayinevelu enkulu yomkhiqizo womhlaba wonke e-Asia ikakhulukazi futhi ngasikhathi sinye yakleliswa endaweni yesi-4 emhlabeni. NgoJulayi 2020, abakwaSamsung baqhubekile nokuhamba phambili ohlwini lwemikhiqizo eyi-1,000 edume kakhulu e-Asia iminyaka eyi-9 ilandelana.
EVietnam, izinto zikagesi kanye nobuchwepheshe bakwaSamsung kukhethwa kakhulu ngabathengi abafana namafoni, omabonakude, iziqandisi, amaphilisi, izinsimbi zomsindo, ama-air conditioner, imishini yokuwasha, ohhavini, nama-microwaves. imikhiqizo enentshisekelo enkulu futhi icatshangelwe ngemiklamo yesimanje kanye nobuchwepheshe obukhaliphile nobulula.
Xem Thêm Cách bảo quản chuối chín trong tủ lạnh lâu hỏng hiệu quả | Muasalebang
Ingabe kufanele ngithenge isiqandisi se-Samsung?
Imikhiqizo yesiqandisi yakwaSamsung emakethe yaseVietnam ivamise ukukhiqizwa eThailand, eChina naseVietnam ngokwezindinganiso zaseKorea. Ngenzuzo yobuchwepheshe, isiqandisi sesizukulwane esisha se-Samsung asiyona nje into yasendlini esetshenziselwa ukugcina nokugcina ukudla, kodwa futhi iqukethe izinsiza eziningi, ezanelisa izidingo zawo wonke umndeni. Ngaphezu kwalokho, iziqandisi ze-Samsung nazo zithola uthando olukhulu ngenxa yentengo nomklamo.
Ukuze uphendule umbuzo othi “Ingabe kufanele ngithenge isiqandisi se-Samsung” funda le mibandela elandelayo:
Idizayini yesimanjemanje, ehlakaniphile
Iziqandisi ze-Samsung zitshalwe kakhulu ngokwendlela yokuklama, ukuze isiqandisi sihlale siwukugqama okuhlaba umxhwele endaweni yakho yangaphakathi. Kusukela kumiklamo, imigqa kuya kumibala, kukhona ukuvumelana nokuba yinkimbinkimbi
Izintengo ezinengqondo, amasegimenti amaningi ongakhetha kuwo
I-Samsung inzima impela ukujabulisa abathengi uma ikhiqiza imikhiqizo eminingi kusukela kwedumile kuya kumasegimenti asezingeni eliphezulu, ehlangabezana nazo zonke izidingo namandla ezomnotho omndeni ngamunye. Ngenxa yalokho, abasebenzisi bangakhetha ngokukhululekile umkhiqizo ofaneleka kakhulu, baqinisekise izidingo ezigcwele futhi babe nenani elihle kakhulu.
Uma ukhetha ukuthenga isiqandisi, ubukhulu kanye nomthamo kungenye yamaphuzu adinga ukucatshangelwa. Kungaba ukumosha ukuthenga isiqandisi esinamandla amakhulu kunezidingo zakho noma ngokuphambene nalokho, isiqandisi sincane kangangokuthi kufanele ulwe kanzima ukuthola indlela “yokufaka” konke ukudla ekhabhinethi. Ngakho-ke, i-Samsung yethule amamodeli amaningi esiqandisi anamandla ahlukahlukene ukusiza abathengi ukuthi bakhethe kalula kuye ngenani lamalungu kanye nezidingo zokugcinwa kokudla kwemindeni yabo.
Ukonga amandla, ekuthuthukisweni okusimeme
Iziqandisi zakwaSamsung zifakwe ubuchwepheshe obuphambili be-Digital Inverter ukusiza isiqandisi sisebenze kahle, sigcine izinga lokushisa elizinzile, sikhulise ukusebenza kahle kokugcina ukudla okusha isikhathi eside. Ngesikhathi esifanayo, ubuchwepheshe be-Inverter bunciphisa ukulahlekelwa kwamandla, buqeda ukukhathazeka kwezindleko zikagesi zanyanga zonke zomndeni.
Ukusebenzisa ubuchwepheshe obuningi obuthuthukile
Ngocwaningo olungapheli nemizamo yokuthuthukisa, iziqandisi ze-Samsung zihlanganiswe nobuchwepheshe obuphambili kakhulu, zinqoba ngisho nabathengi abasheshayo. Obunye ubuchwepheshe obuvelele buhlanganisa:
– Amayunithi amabili azimele we-Twin Cooling Plus angaphakathi: Ngokungafani neziqandisi ezivamile ezineyunithi eyodwa kuphela yasendlini esebenzayo yokupholisa kokubili ifriji namakhomphyutha apholile, isiqandisi se-Samsung Twin Cooling Plus sisebenzisa amayunithi angu-2 ahlukene asendlini emakamelweni angu-2. Ngenxa yalokho, izinga lokushisa ekamelweni ngalinye lingashintshwa kalula, kuvinjwe iphunga lokudla phakathi kwamakamelo, nokugcina umswakama ongcono kakhulu wokudla endaweni epholile.
– Igumbi lefriji elithambile le-Optimal Fresh Zone ukugcina izinga lokushisa ekamelweni ku–1 ° C kwenza ukudla kusha izikhathi ezingu-2 kunasemakhazeni, futhi ngesikhathi esifanayo kungaqandisiwe, kugcina izakhi eziningi, ukusika kalula, ukusika, ukupheka ngaphandle kokuncibilika kwethusi.
– Ubuchwepheshe be-Mr.Coolpack: Ngisho noma isiqandisi “singokoqobo” ngobuchwepheshe obuningi, ngeke sisebenze lapho ugesi ucishiwe. Lapho ugesi uphela isikhathi eside, ukudla kuzoncibilika, kube namanzi futhi konakale ngokushesha. Ubuchwepheshe be-Mr.Coolpack eziqandisini ze-Samsung buzobona ngokuzenzakalelayo inkinga futhi babe nekhono lokusabalalisa umoya obandayo ngemva kokuphelelwa amandla, okusiza ukonga umoya obandayo ngaphakathi kwesiqandisi amahora angu-8 (esiqandisini), ukuqinisekisa isiqandisi Esilungile sokudla.
– Ubuchwepheshe bokupholisa iDome Ngokusakazwa komoya obandayo ku-arc ukusiza umoya obandayo usakazeke ngokulinganayo kuyo yonke iKhabhinethi, ugcine izinga lokushisa elifanayo kanye nomswakama ozinzile, ukugcina ukudla kukusha isikhathi eside, kungonakaliswa ukwehluka kwezinga lokushisa.
Ubuchwepheshe be-antibacterial kanye ne-deodorizing: Isihlungi se-carbon activated sibhubhisa amagciwane ayingozi kanye nesikhunta esivela ekudleni, sigcina umoya osesiqandisini uhlanzekile, sinokujikeleza komoya okuzinzile, sigwema ukungcoliswa amagciwane ukuze kuqinisekiswe ukuphepha kokudla.
Ukuhlanganisa izici eziningi ezihlakaniphile eziwusizo
Iziqandisi ze-Samsung ezisezingeni eliphezulu ziya ngokuya ziba nobuhlakani futhi zenza imisebenzi eminingi uma zifakwe izici eziningi ezihlukile nezilula ezifana nalezi: Ukwenza iqhwa okuzenzakalelayo; thola amanzi, khipha iqhwa; shiya imilayezo, amanothi wabathandekayo noma uxhume ifoni ukuze uthole izingcingo kusukela esikrinini sesiqandisi; Finyelela ku-inthanethi, ubuke izindaba, ubuyekeze isimo sezulu, phrojusa noma yisiphi isithombe, ividiyo noma udwebe wena isithombe, dlala umculo, …
Ingabe umshini wokuwasha we-Samsung muhle?
Imishini yokuwasha isiphenduke into esetshenziswayo emindenini eminingi yaseVietnam namuhla, okunomthelela ekwehliseni umsebenzi wasendlini kanye nokukhulula abasebenzi bezindlu. Umshini wokuwasha we-Samsung ungomunye wemikhiqizo ethandwa kakhulu emakethe yaseVietnam futhi uhlala uthola ukwethenjwa okuningi kumakhosikazi asekhaya. Imishini yokuwasha ye-Samsung ihluke kakhulu kumamodeli, izinhlobo namanani, ngakho abathengi bazozikhethela bona nemindeni yabo kalula umkhiqizo ohlangabezana ngokugcwele nazo zonke izindlela.
Njengeminye imikhiqizo ye-Samsung, imikhiqizo yomshini wokuwasha nayo inakekelwa ekwakhiweni, kusukela kokulula nokuhle kuya kokunethezeka nesimanje. Ngaphandle kwalokho, izinto zomshini wokuwasha nazo ziyizinto ezisezingeni eliphezulu, eziqinisekisa ubuhle kanye nokuqina. AbakwaSamsung banaka kakhulu ukusebenziseka ekwakhiweni ukuletha ukunethezeka nokunethezeka okukhulu kubasebenzisi.
Idizayini yomnyango we-Addwash ingeza lula
Ngomshini wokuwasha olayisha ngaphambili, ngeke ukwazi ukuvula umnyango phakathi nenqubo yokuwasha. Idizayini yomnyango we-Addwash emshinini wokuwasha we-Samsung omusha ikuvumela ukuthi wengeze ilondolo eyengeziwe ngenkathi umshini usebenza, okuyinto embalwa kakhulu imishini yokuwasha elayishwa ngaphambili ekwazi ukuyenza. Ungakwazi ukwengeza amanzi okugeza ngokukhululekile ngaphandle kokwesaba izinto ezingenaphunga elimnandi, okukongela isikhathi nogesi.
Xem Thêm Top 3 tủ lạnh Sanyo 180l giá rẻ đáng mua nhất | Muasalebang
Yonga amandla ngobuchwepheshe be-Digital Inverter
Imishini yokuwasha yakwaSamsung ifakwe ubuchwepheshe be-Digital Inverter obunamandla okukhawulela ukungqubuzana, ukunciphisa umsindo nokudlidliza, okusiza injini ukuthi isebenze ngokuzinzile futhi yonge ugesi.
Isivinini sokujikeleza esinamandla
Isivinini sokuphotha sidlala indima ebalulekile ekuhlanzeni kanye nokomisa izingubo. Ngakho-ke, i-Samsung ihlomisa umshini wayo wokuwasha ngesivinini esinamandla se-spin ukuthuthukisa ukusebenza kahle kokuwasha. Imishini yokuwasha elayisha phezulu ivamise ukuba nesivinini se-spin sika-680 kuya ku-720 rpm, kuyilapho imishini yokuwasha elayisha ngaphambili inesivinini se-spin sika-1000 kuya ku-1200 rpm.
Izinhlelo zokuwasha ezihlukahlukene
Imishini yokuwasha yakwaSamsung ivamise ukuba nezinhlelo zokuwasha ezisuka ku-7 kuye kweziyi-12, kuye ngomugqa womkhiqizo. Ungakhetha izinhlelo zokuwasha ezakhelwe emshinini, okuhlanganisa: Ukotini, okokwenziwa, izingubo zezemidlalo, uvolo, ukugeza izandla, ukuwashwa kwedenim, okokugqoka kwezingane, ukuwasha okuvamile, ukugeza okusheshayo kwemizuzu engama-29, khipha amanzi, ukukhama, khipha+ khama.
Isigubhu sedayimane sinokuqina okuphezulu, sinakekela ngobumnene indwangu ngayinye
Ukuma kwesigubhu kuncike ekuklanyweni komshini. Ngomshini wokuwasha olayisha phezulu, isigubhu sihlelwe endaweni eqondile nethreyi yokuwasha etholakala phansi kwekheji. Phakathi naleso sikhathi, umshini wokuwasha olayisha ngaphambili uzoba nesigubhu esivundlile esinomshini ojikelezayo we-centrifugal.
Umshini wokuwasha we-Samsung unomgqomo owenziwe ngezinto ezisezingeni eliphezulu ezingenasici, ezingapheli kuphela kodwa futhi zivikela izingubo emonakalweni. Ingaphakathi lekheji linomklamo wedayimane oyingqayizivele, onezinkulungwane zemigodi emincane yokukhipha amanzi ukuze ugeze kahle futhi uvikele indwangu.
Ubuchwepheshe bokugeza amabhamuza be-Eco
Ukusebenzisa amagagasi e-sonic ukudala amabhamuza ukusiza ukuncibilikisa impushana yokuwasha, ukudala amabhamuza omoya amahle kakhulu, angena ajule ezingutsheni, asuse wonke amabala okunzima ukuwawasha. Ngesikhathi esifanayo, ungakwazi ukugeza ngokushisa okuvamile ngaphandle kokusebenzisa amanzi ashisayo njengobuchwepheshe obudala, ungashiyi insipho yensalela.
Ubuchwepheshe bokuwasha umusi STEAM CYCLES
I-steam eshisayo izofafazwa ngokuqhubekayo engutsheni, kuhlanganiswe nokujikeleza kwesigubhu ngaphandle kokuhlanza. Ibulala kufika ku-99.9% wamagciwane kanye nezinto ezingezwani nazo, ivikela isikhumba sakho nesezingane zomndeni wakho.
Vikela izindwangu ezithambile nge-Wobble
Ithreyi yokuwasha i-Wobble ubuchwepheshe obusha emishinini yokuwasha yakwa-Samsung, enokugeleza kwamanzi okunezinhlangothi eziningi okudalwe futhi kwangena ekujuleni kwendwangu ngayinye, kusiza ukukhipha amabala, ukuvikela izingubo ekumpintsheni nasekulimaleni.
I-Air Turbo Drying System
Ngesikhathi somjikelezo we-spin, i-Air Turbo spin-drying system iphenduka ngokushesha isigubhu, futhi ngesikhathi esifanayo, okokudonsa komoya okubili kudonsa umoya omningi ukusiza ukukhama amanzi amaningi aphume ezingutsheni zakho.
Ubuchwepheshe be-Antibacterial Ag + Silver Nano
Ubuchwepheshe be-Antibacterial Ag + Silver Nano ™ buzodala ama-ion esiliva abulala kufika ku-99% wesikhunta, amagciwane, … futhi asuse iphunga elibi. Izingubo zakho zizohlala zihlanzekile, zizintsha, ziqinisekisiwe ukuthi ngeke ziphazamise isikhumba somuntu ozigqokile.
Ngaphezu kobuchwepheshe obuvelele obungenhla nezinsiza, iziqandisi ze-Samsung nemishini yokuwasha nazo zihlanganiswe nobuchwepheshe obuningi obuphambili. Lobu buchwepheshe buhlala buthuthukiswa futhi buthuthukiswa ukuze bunikeze izidingo zabasebenzisi kangcono, okunikela ekuthuthukiseni izinga lempilo. Ngokuqinisekile ngeke udinge ukuzisola ngokukhethela umndeni wakho le mikhiqizo.
Hướng dẫn cách sửa máy giặt Toshiba báo lỗi E23 tại nhà | Muasalebang
Thiết bị kích sóng Wifi TP Link TL-WA850RE giá rẻ, giao trong 1h | Muasalebang